Mahitsy Be Ilay Mpiasan’ny Firenena Mikambana Tamin’ny Fanombanany an’i Hongria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Marsa 2016 6:24 GMT
Ny fanamby tahaka izany dia ahitana ny fanalefahana ny rafitry ny lalàm-panorenana sy ny tany tàn-dalàna, tahaka izany koa ny fampidirana ny lalàna izay mampihisatra ny fahalalahana maneho hevitra, fahalalahan'ny fanomezam-baovao, fahalalahan'ny fikambanana, fahalalahan'ny fivoriana ary ny fidirana amin'ny fitsarana. Miatrika loza mitatao goavana sy tratry ny fanilikilihana bebe kokoa ireo vondrona manokana mpiaro ny zon'olombelona, toy ny vehivavy ( indrindra fa ireo izay manao fanentanana momba ny zo mahakasika ny firaisana ara-nofo sy fananahana), ny LGBTI, ary ireo Roma mpiaro ny zon'olombelona. Matetika miaritra fanenjehana sy valifaty ireo mpiampanga sy ireo izay miasa amin'ny resaka fangaraharana sy ady amin'ny kolikoly.
Azo vakiana eto ny lahatsoratra manontolon'ny tatitra amin'ny teny Anglisy ( miaraka amin'ny dikany azo sintonina amin'ny fiteny Hongroà ihany koa ) nataon'i Forst. Amin'ny Filankevitry ny Firenena Mikambana atao any Zeneva amin'ny Martsa 2017 no hanoloran'i Michel Forst ny tatitra farany.
Ohatra tsy nitsitsy i Michel Forst tamin'ny filazàny ny vokatry ny fanombànany ny #habaka sivily ao #Hongria @CIVICUSalliance